Archives | Knowledge Management + Decision
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (December)2018
by adminkmd | Dec 19, 2018 | csr
KMD မိသားစု ၏ (၁ဝ) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် ကို 7. December .2018 တွင် အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ တွင် စာရင်းပေး ဝန်ထမ်း (၁ဝ၁) ဦး ထဲမှ ဝန်ထမ်း (၇၇) ဦး သွေးလှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် အရ 1st time တွင် (၅၃)...
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (April)2018
by adminkmd | Dec 7, 2018 | csr
KMD မိသားစု ၏ (၈) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် ကို 6. April.2018 တွင် အောင်မြင်စွာပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ တွင် သွေးလှူ ရန် စာရင်းပေး ဝန်ထမ်း (၁၁၁) ဦး ထဲမှ ဝန်ထမ်း (၇၁) ဦး သွေးလှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် အရ 1st time တွင်...
တတိယအကြိမ်မြောက် KMD မိသားစု ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
by adminkmd | Mar 23, 2018 | csr
KMD မိသားစုဝင်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မားရေးအတွက် တတိယအကြိမ်မြောက် KMD ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုချီးမြင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်(၁၁)နာရီက Waterboom ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းတွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်လုပွဲကို...